१ फागुन, काठमाण्डौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजको बजारमा विदेशी मुद्राको भाउ यसप्रकार तोकेको छ ।
बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले आज माघ १ गते (फेब्रअरी १३) को नेपाली बजारमा अमेरिकी डलर १ को खरिददर ११३ रुपैयाँ ८४ पैसा र विक्रिदर ११४ रुपैयाँ ४४ पैसा रहेको छ ।
त्यस्तै युरो १ को खरिददर १२४ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रिदर १२४ रुपैयाँ ९१ पैसा रहेको छ भने युके पाउण्ड १ को खरिददर १४७ रुपैयाँ ८० पैसा र विक्रिदर १४८ रुपैयाँ ५८ पैसा रहेको छ ।
त्यस्तै कतारी रियाल १ को खरिददर ३१ रुपैया २७ पैसा र विक्रिदर ३१ रुपैयाँ ४३ पैसा रहेको छ । साउदी रियाल १ को खरिददर ३० रुपैया ३५ पैसा र विक्रिदर ३० रुपैयाँ ५१ पैसा रहेको छ भने युएई दिरहाम १ को खरिददर ३० रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ १५ पैसा रहेको छ ।
बहराइन डिनार १ को खरिददर ३०१ रुपैया ९१ पैसा र विक्रिदर ३०३ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ ।
कुवेती डिनार १ को खरिददर ३७३ रुपैया ५४ पैसा र विक्रिदर ३७५ रुपैयाँ ५१ पैसा रहेको छ । साथै मलेसियन रिंगेट १ को खरिददर २७ रुपैया ५३ पैसा र विक्रिदर २७ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको छ ।
यस्तो छ अन्य मुद्राको भाउ ?
Exchange Rate for 13 February 2020
यस्तो छ आजको बजारमा विदेशी मुद्राको भाउ, हेर्नुहोस् कुन घट्यो कुन बढ्यो ?
२६ चैत, मकाउ । मकाउमा रहेर नेपाली समुदायका बीच फोटोग्राफरका…
मेष चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ…
विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या १३ लाख ४४ हजार नाघ्यो, ७४ हजार ६ सय भन्दा बढिको मृत्यु
नेपालको लागी कोरोना एक अवसर पनि हुन सक्छ
मानिसबाट जनावरमा सर्योे कोरोना भाईरस